Muxuu Cali Maxamed Geedi ka doonay Kismaayo? (Xog laga helay safarkiisa) - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Cali Maxamed Geedi ka doonay Kismaayo? (Xog laga helay safarkiisa)
Muxuu Cali Maxamed Geedi ka doonay Kismaayo? (Xog laga helay safarkiisa)
Kismaayo (Caasimada Online) Magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada Hoose, waxaa galabta oo Axad ah gaaray wafdi uu hoggaaminaayo ra’iisal wasaarihii horre ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geed iyo xubno kale oo ay ku jiraan xubin baarlamaan oo ka socday Kenya.
Cali Geedi oo gaaray Kismaayo
Wafdiga ayaa markii lagu soo dhaweeyay garoonka , waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyda, halkaasoo ay kula kulmeem mas’uuliyiin ka tirsan maamulka KMG ah ee Juba.
Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay inta wafdiga ay soo dagayeen, waxaana meel kasta la dhigay ciidamo fara badan, waxaa la xiray waddooyinka soo gala xarunta madaxtooyda.
Cali Geedi ayaa markii dambe saxaafadda la hadlay isagoona sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay imaashiyaha magaalada Kismaayo.
Wuxuu tilmaamay in uu ka mid ahaa shakhsiyaad geed iyo geed gaaban u fuulay siddii loo aqoonsan lahaa maamulka Axmed Madoobe.
“Maamulka Jubooyinka in la aqoonsado geed dheer iyo mid gaban ba waan u fuulay Illaah ayaa mahad leh maanta Kismaayan joogaa, waxaan goob joog u ahay caleemasarka madaxwyanaha iyo wasiiradii oo dhisana waan arkaa, waxaana rajaynaya qaybaha dhimman in ay si wanagsan inoogu dhammaan doonan, laakin waxaa xusid mudan Ammaanka magaalada sida ay mas’uuliyiinta Maamulku uga taxadareen runtii waa astaan wanagsan oo SoomaAlida inteeda kale ay ku dayan karaan” ayuu yiri.
Cali Geedi ayaa ugu dambeyn madaxda dowladda ka codsaday in ay la shaqeeyaan maamulka Axmed Madoobe oo uu yiri waxa ay qabteen wax yaabo lamahdin karo.
Wariye ka tirsan Caasimada Online oo ku sugan magaalada ayaa soo sheeganaya in ganacsiga magaalada iyo adeegyada kale ee bulshaduba ay xiran yihiin, waxaana magaalada soo gaaray wufuud ka qeyb-galaysa xafladda caleemasaarka madaxda maamulka KMG ah ee Jubba ee dhici doonta berri oo Isniin ah.